Oduu Archives - Page 4 of 146 - OMN
OMN: Qe’ee Oromiyaa (Qophii Haaraa) Ebla 25, 2018)
OMN: ODUU (EBLA 25, 2018)
OMN:ODUU Ebla 25, 2018
Humnoonni Addaa Naannoo Somaalee godina Harargee bahaa Aanaa Erar-Gootatti weerara banuun miidha daqabsiisan.
OMN:Ebla – 25/2018 Godina Harargee bahaa magaalaa Erar Gootaa iddoo laga Qanxaraasaa jedhaamtutti guyyaa kaleessaa fiinxaaleeyyiin kaayyoo waraana addaa naannoo Soomaalee tarkaanffachiisan...
Dargaggoonni Oromoo 4 Baale magaalaa Gindhiir irraa ka’uun Muummicha Ministeeraa Dr.Abiy Ahimed dubbisuuf miilaan imaluun amna guyyoota 16’tiin booda KM 555 miilaan qaxxamuruun guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee gahaniiru.
OMN:Ebla – 25/2018 Filamuu Muummicha Ministeeraa Itiyoophiyaa Dr.Abiyyii Ahimed ilaalchisuun gammachuu isanitti dhagahame ibsachuudhaaf akkasumas ilmaan Oromoo qabsoo irratti woreegaman yaadachuuf, rakkoolee...
Shawaa bahaa magaalaa Bishooftuu fi godina Jimmaa Limmuu kossatti hidhaa fi dararaan Komaandi-poostiin dargaggoota Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera.
OMN:Ebla – 25/2018 Godina Shawaa bahaa magaalaa Bishooftutti dargaggootni 60 ol ta’an humna komaandi poostiin butamanii manneen hidhaatti darbatamuun dararamaa jiraachuu maddeen...
OMN: የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ (LIVE) April 24, 2018
Dhalattoonni Oromoo ollaa magaalaa Hararii jiraatan biyyuma keenya keessatti bobbaanee hojjannee jiraachuu hin dandeenye jechuun komii qaban dubbatan.
OMN:Ebla -24/2018 Ummanni Oromoo magaalota ollaa naannoo Hararii jiraatan biyyuma keenya keessatti hojjannee jiraachuu dadhabneerra jechuun komii isaanii OMN’tti himan. Godina...
Harargee bahaa Aanaa Qumbiitti Raayyaan ittisa biyyaa wayyaanee nageenya Ummata booressuun jiraattota tasgabbii dhoowwaa akka jiru himame.
OMN:Ebla 24/2018 Godina Harargee Bahaa Aanaa Qumbiitti labsii yeroo muuddamaa dahoo godhachuun rakkoon raayyaa ittisa Wayyaaneetiin jiraattoota qunnamaa jirtu hammaachuun dhagahame. Sababa...
Humnoonni Komaand-poostii Godina Baalee Aanaa Gaasaraa magaalaa Dambalitti dargaggoota adamsanii hidhuun reebicha hamaa irratti gaggeessaa jiraachuun gabaafame.
OMN:Ebla – 24/2018 Hidhaa fi dararaan humnoota Komaandi poostiin hawaasa nagayaa irratti raawwatamaa jiru, labsii yeroo muddamaa kan seeraan ala labsame dawoo...
OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA (EBLA 23, 2018)
OMN: Oduu (Ebla 22, 2018)
OMN (Seattle): Rakkoo Ummata Baaalee Ilaalchisee (Ebla 22, 2018)
OMN: SIDAAMU TELEVIZHIINE (የሲዳማ ቴሌቪዢን) April 21, 2018)
OMN: ODUU Ebla 21/2018
OMN: Xiinxala Haala Yeroo Irratti (LIVE) Ebla 20, 2018
OMN: ODUU EBLA (20, 2018)
OMN:ODUU (Ebla 20, 2018)
featured Ethiopia Oromia #OromoProtest oromo omn #BecauseIamanOromo Oromia Media Network #OromoProtests UN Finfinnee Master plan USA Finfinnee OFC OLF Minnesota IGAD oromo new Oromo Music news Refugees Addis Ababa Kenya oromo tv Finfinne master plan Ethiopia Featured Music oduu EPRDF Somalia Ambo oromia tv Africa South Sudan Sudan OSFNA tv oromia Student Indoctrination Eritrea tv oromo